HTC U11 EYEs - အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်ပုံများ Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | HTC က, မိုဘိုင်း, NOTICIAS
ယခုနှစ်အစတွင် HTC U စီးရီးသည်အသင်းဝင်အသစ်ကိုလက်ခံရရှိသည်။ အသစ်နှင့်ပတ်သက်။ ပထမ ဦး ဆုံးအသေးစိတ်ကတည်းက အလယ်အလတ် အလွန်မကြာမီအကွာအဝေးထိမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက HTC U11 EYEs ပါ။ ယင်း၏ယိုစိမ့်မှုကို Evan Blass သို့ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာ၏ဒီဇိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ကို HTC U11 ကိုချက်ချင်းစဉ်းစားစေသည်။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များအတန်ငယ်ရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်။
၎င်းသည် EYE အမည်ဖြင့်ကုမ္ပဏီကိုစတင်မိတ်ဆက်သောမော်ဒယ်သစ်ဖြစ်သည်သူတို့လေးနှစ်နီးပါးတ ဦး တည်းစတင်ကတည်းက။ ယခုမော်ဒယ်အသစ်ဖြစ်သော HTC U11 EYEs တွင်ပထမဆုံးပုံရိပ်များပေါက်ကြားခဲ့ပြီးအချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလူသိများသည်။ Mid-range အသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘာသိုလှောင်ထားနိုင်သနည်း။
ဖုန်းကစျေးကွက်ထဲကိုရောက်လာတယ် ၆ လက်မ Super LCD3 မျက်နှာပြင်။ သင်မျက်နှာပြင်၏ဒီဇိုင်းကို frame များမပါဘဲခန့်မှန်းနိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည် မျက်နှာပြင်အချိုး 18: 9။ ဒါကြောင့်စျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုထပ်ဖြည့်ပေးတယ်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းတွင် Full HD + resolution ရှိလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်ဒီ HTC U11 EYE များသည် IP67 အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်ရေခံနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုသည်။ ဒါကြောင့်တက်နစ်မြုပ်နိုင်ပါတယ် မိနစ် ၃၀ ခန့်ရေအောက်တွင် ၁ မီတာ။ ပုံ၏ထွက်ပေါ်လာသည့်ရုပ်ပုံများအရဖုန်း၏ပစ္စည်းသည်ဖန်ခွက်ဖြစ်သည်။ ကအတည်ပြုမရနိုင်ပေမယ့်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီဖုန်းမှာ Processor တစ်ခုရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ် Snapdragon 652 နှင့်အတူလိုက်ပါလာ4GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 64 GB အဆိုပါနေစဉ် ဘက်ထရီမှာ ၃,၉၃၀ mAh ဖြစ်သည် စွမ်းရည်။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဖုန်းထဲမှာ Android Nougat ကို Operating System တစ်ခုအနေနဲ့ရလိမ့်မယ်။
ဒီ HTC U11 EYE ၏ကင်မရာအကြောင်းဘာမှမသိသေးပါဘူး။ သို့သော်ပုံများမှသူ၌ရှိလိမ့်မည်ဟုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်ရှား၏ ရှေ့ကင်မရာနှစ်ခု။ သို့သော်ယင်း၏အရည်အသွေးကိုမူမထုတ်ဖော်နိုင်သေးပါ။ ဒီတော့စက်မှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစောင့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၃၂၉၉ ယွမ်ကုန်ကျမည်ဟုခန့်မှန်းရသည် ပြောင်းလဲမှုသည်ယူရို ၃၉၉ ဖြစ်သည်.
ကံကောင်းတာကဒီ HTC U11 EYEs တွေကိုမြင်ဖို့ငါတို့အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်စရာမလိုတော့ပုံရသည်။ ပစ္စည်း၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုဒီဇန်နဝါရီလ 15 ကတည်းက.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC U11 မျက်လုံးများ - ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်